आमा भन्छिन्ः कुखुरा जुध्दा पनि मेरो छोरो परदेशबाट आइपुग्यो झैं लाग्छ - deshparadesh |सीप, समृद्धि र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि
रामबहादुर ९ बर्ष अघि कमाउन मलेसिया गएका हुन् । घरमा चार छोराछोरी, श्रीमति, आमा अनी भाईबहिनीलाई छोडेर गएका उनले तीन बर्षसम्म राम्रैसँग कमाएर पठाए पनि । तर घर आउने बेलामा अकस्मात उनले केहि बर्ष अझै उतै बस्ने निधो गरे ।
कम्पनी छोडेर अन्यत्रै काम गर्न थालेपछि रामबहादुरको सम्पर्क परिवारसँग पातलिंदै गयो । ६ बर्षदेखि जेठो छोरो यसरी सम्पर्कविहिन हुँदा रामबहादुरकी आमा सुनकुमारीको मनमा औडाहा चलिरहन्छ । उहिले कुखुरा जुध्दा पनि सासुले छोरो अव परदेशबाट आउने भयो भन्थिन रे । त्यसैले हिजोआज काग कराएपनि वा कुखुरा जुधेपनि सुनकुमारीलाई मलेसियामा बेखवर भएको छोरो आइपुग्छ की भन्ने लाग्छ ।
रामबहादुरको तस्वीर भित्तामा झुण्ड्याएको रहेछ । आमा सुनकुमारीले हामी हिंड्न लाग्दा तस्वीर देखाउन मन गरिन् । तस्वीरमा केहि धुलो लागेको थियो । आमाले मायालु तरिकाले छोराको अनुहार सुम्सुम्याए जस्तै गरी जतनसँग त्यसमा लागेको धुलो पुछिन् ।
रामबहादुर कार्कीलाई तपाईले मलेसियमा कहिं देख्नु भएको छ ? वा उनका बारेमा तपाईलाई कुनै जानकारी छ की ? यदि जानकारी भएमा परिवारलाई नेपालमा ९८६० ६५ ६६ ४३ मा खवर गरिदिनु होला । यसैगरी सुरक्षित आप्रवासन सुचना तथा परामर्श केन्द्र, रामेछापको फोन नम्वर ०४८-५४०३९८ मा खवर गरिदिन सक्नुहुन्छ । (रामेछापबाट सागरविक्रम बस्नेतको सहयोगमा)